Momba anay | Piedra (Xiamen) Sculpture Co., Ltd.
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD dia manam-pahaizana manokana amin'ny fanaovana sary sokitra sy sarivongana, toy ny sary sokitra vy, sarivongana alimo, sary sokitra, sary sokitra fibre, sns. Ireo sary sokitra varahina sy zava-kanto vita amin'ny vy dia azo ampiasaina ho sary sokitra, sarivongana ivelan'ny trano, haingon-trano vita amin'ny rindrina, haingon-trano, sns.
Miaraka amin'ny traikefa mihoatra ny 15 taona amin'ny famokarana sy fanondranana sary sokitra vy sy sary sokitra varahina, afaka manome anao fitaovana tena tsara sy kalitao avo lenta mahery vaika, fiasana mamirapiratra lehibe amin'ny sary sokitra stainless vy, asa kanto kanto. Ny sary vongana ataonay indrindra dia ho an'ny mpanakanto, mpamorona endrika, galisiana, mpivarotra ambongadiny, tetik'asa fananganana ......
Noho ny fitantanana kalitao henjana sy laza tsara any ampitan-tany sy eto an-toerana, dia amidy amin'ny firenena maro, USA, Eropa, Emirà Arabo Mitambatra, Arabia Saodita, Israel, Indonezia, sns. Singapore sy Filipina, manantena orinasa marobe na olona hiaraka aminay isika hanangana hoavy mamirapiratra!
Hevitra momba ny “Kalitao avo indrindra, trosa tsara indrindra ary fahafaham-po an'ny mpanjifa” no fanahy ao amin'ny fiarahanay. Ny faniriana dia afaka manana fotoana hanompoana anao !!
Isan'ny mpiasa: 100 ~ 150
Taona nanorina: 2006
Nihaona tamin'ny mpanjifa onexhibition sy galeriana kanto izahay. Mpiara-miasa amin'ny mpanjifanay izahay avy amin'ny fifandraisana voalohany mankany amin'ny serivisy aorian'ny varotra. Amin'ny maha-mpamatsy sary sokitra matihanina anay, dia miresaka momba ireo zavatra takiana amin'ny mpanjifanay izahay ary manome sary sokitra metaly lehibe ho azy ireo. Miaraka amin'ny fifandraisana isan-taona dia nametraka fifandraisana maharitra izahay ary nahazo laza tsara amin'izy ireo.
Ny sarin'ny orinasa
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD 10 taona mahery eo amin'ny tsipika fandraharahana sary sokitra, manana traikefa manan-karena amin'ny famolavolana sy famoronana sary sokitra namboarina sy sarivongana. Ny vokatra dia misy sary sokitra vy, vy, varahina ary fiberglass. Ny sary sokitra rehetra dia tsy napetraka ho haingo ivelany fotsiny, toy ny fialan-tsasatra amin'ny fialantsasatra, ny fikarakarana ny zaridaina, ny haingon-dranomasina, ny villa, ny fandraisan'ny tanàna; fa koa ny haingo anaty trano, toy ny haingon-trano fandraisam-bahiny, haingon-trano amin'ny klioba, haingon-trano fivarotana, firavaka birao, haingon-trano, fampirantiana galeri sns. Mino ny sary sokitra maoderina sy famoronana kokoa, hahafinaritra ny masonao ary hamoaka ny hatsaranao.
Raha atao teny iray, dia manana ekipa matihanina sy mpiara-miasa izahay hamaly ny takinao. Ny ekipanay dia ahitana mpitarika tsy mazava, mpivarotra mahay, mpamorona zavakanto tsara, mpiasa traikefa be, olona mahay mifehy. Manana traikefa tena manan-karena amin'ny famoronana sary sokitra sy torolàlana napetraka amin'ny sary sokitra. PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD azo antoka fa afaka manome serivisy betsaka araka ny fangatahan'ny mpanjifa.
Ny serivisinay tsara:
01. Omeo sary vitsivitsy ny sary sokitra ho an'ny mpanjifa.
02. Manome endrika endrika sary raha mila mpanjifa.
03. Manamboatra sary sokitra avo lenta ho an'ny mpanjifa.
04. Ny famolavolana an'ny mpanjifa dia arahabaina am-pitiavana
05. Mandamina fandefasana entana ho an'ny mpanjifa.
06. Omeo torolàlana momba ny fametrahana tranokala ho an'ny mpanjifa, ary omeo ny mpiasa hapetraka eo an-toerana ho an'ny tetikasa lehibe.
07. Manome tolotra amidy sy varotra teo aloha.
08. Manomeza fomba voatazona ho an'ny mpanjifa.
09. Afaka manohitra tetik'asa sarotra sasany.
Tongava eto hatrany mba hanome ny tsara indrindra alohan'ny serivisy sy ny serivisy aorian'ny varotra.
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=18879768 '' Afaka matoky ianao fa afaka miara-miasa aminay ianao. Tongasoa anao am-pitiavana mba hanontany anay amin'ny fotoana rehetra, ary ho eto foana izahay hamaly.
ROOM 1407, CHANGAN BLDG, NO.75-77 LVLING ROAD, DISTRICT HULI, XIAMEN, 361009, FUJIAN, CHINA